Isikhokelo esigqibeleleyo kwi-MCSA 2016 Certification | IYO
I-MCSA 2016 Certification
Ngubani oya kuhamba MCSA 2016 sekiso?
Umntu ongaphantsi kwakhe ofuna ukuqala umsebenzi wakhe kwi-Microsoft iseva ye-infrastructure management.
Ingcali efuna ukuhlaziya ubuchule bakhe obukhethekileyo ukusuka kumncedisi omiselweyo ukuya kutshanje
Umtsalane Abalawuli / izakhiwo
Yiyiphi inani leemviwo ezikhoyo?
Ukuphelisa i-MCSA kufuneka ubonise iimviwo ezintathu.
Ziziphi iincwadi ezikhoyo?
Kukho iincwadi ezintathu zokuvuselela i-MCSA
Ngaba kukho naziphi iimfuneko ezifunekayo kwesi siqinisekiso?
b.Ukuba u-MCSA 2012 uqinisekisiwe, ngelo xesha unako ukugqithisa isatifikethi sakho kwi-MCSA 2016 ngokunika uvavanyo olulodwa (70743)
Kutheni i-MCSA eneServer 2016
Le nkqubo yokusebenza yomncedisi ibonise itoni yeempawu ezintsha ezinokukuthatha kwizinga elifanelekileyo lokulawula, kwaye kwakhona kukunceda ugcine izindleko zombutho wakho. Nolu uluhlu lwezinto ezintsha ezinikezwa kwi-Server 2016.
Umncedisi we-2016 unika ulungelelaniso oluthe xaxa kunye neendleko zedatha yokusebenza, apho sinokusebenzisa khona i-software echazwe kwi-software, Ukugcinwa kunye nokunxibelelanisa ukwenza i-datacenter yethu. [Kungekho nantoni na ukuba oku kulungile. ]
Umncedisi we-2016 unikezela ngeVietalization ezitshintshiweyo kwi-hyper-v, ngoko ngoku ungayifaka i-hyper-v ngaphakathi komshini obonakalayo.
UMicrosoft uye wabonisa iseva encinci, elona lincinci kuneziko loncedisi.
Ukunikezwa kwesicelo sokuqhawulwa kwesicelo kuluhlu lwegama lomsebenzi olutsha.
Ukunikezelwa kokuzikhethela kwi-hyper-v
Ukujongana neefestile kunye ne-hyper v.
Yenza ukuba ubonakalise i-VM yakho kwi-HOST ngaphandle kokunye ukucwangcisa.
Okwangoku singenza isizukulwana 2 linux VM kwi-hyper-v.
Ukwenza ulawulo lweeVM ezahlukeneyo lufuneke
Ukuphuculwa kweCluster Cluster
Yenza ifu elingqina ngokusebenzisa ukuzula
Ukugcina ukuphindaphinda kwenqanaba le-block agnostic
Ukugcina indawo ngqo
Indawo yokugcinwa ngqo iyakususa imfuno ye-SAS ebelwanayo.
Ubuchule bokusebenza bukunikezela ukusekwa kwe-SDN.
Zizo zonke i-akhawunti kungekhona kuphela izinto ezintsha esinazo kwi-server ye-2016, yiyona nto ibini ejolise kuyo. Uya kuba ngaphezulu kwesi sikhokelo sakho se-MCSA.
Xa uza kugqiba isiqinisekiso sakho se-MCSA kunye nomncedisi we-2016 uya kuba namandla okusebenzisana naye
Ukufakwa, Ukugcina nokucwangcisa, iDSC
I-Intanethi ye-IPV4 / 6, i-SDN, i-NPS, i-NAP, i-VPN, i-DAS, iququzelele ubuchule.
Ubume buchaza i-ADDS, ADRMS, ADFS, ADCS, iDAC, i-AD.